आमा, पहिलो पाठशाला, पहिलो पाकशाला- विविधा - कान्तिपुर समाचार
आमा, पहिलो पाठशाला, पहिलो पाकशाला
वैशाख २१, २०७६ कमल रिजाल
आमाको सम्झना गर्ने दिन हो, आज । आमा हुनेहरू मनपरेको खान-लाउन दिएर सम्मान गर्छन्, नहुनेहरू आफ्नै तौरतरिका अनुसार आमाको सम्झना गर्छन्, यस दिन । आमाभन्दा ठूलो कोही छैन, हुन्न कसैका लागि पनि । ठूला देवता पनि उनै हुन्, ठूला तीर्थ पनि उनै । संस्कृत भाषामा आमालाई माता भनिन्छ । सायद मदर, अम्मा, अम्मु पनि यसैका अपभ्रंश हुनुपर्छ ।
पाणीय व्याकरण अनुसार 'मान्' धातुबाट माता शब्द बनेको छ, जसको अर्थ हुन्छ- माननीय, वन्दनीय, स्मरणीय आदि । अथर्ववेदले आमा पृथिवी समान वन्दनीय हुन्छिन् भनेको छ । पृथिवीबाट जेजस्ता काम हुन्छन्, ती सबै आमाले गर्छिन् भन्ने उसको मान्यता छ ।
'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।' -अथर्ववेद १२।१।१२) अथर्ववेदको १२ औं काण्डको पहिलो सूक्तलाई भूमिसूक्त भनिन्छ, जहाँ ६३ मन्त्र छन् । रूपमा माता भूमिको विशेषता गाएको यस सूक्तले सारमा आमाको बढी वन्दना गरेको छ । वेदले आमालाई कतै अग्नि र हवि भनेको छ । -शुक्लयजुर्वेद २३।२५) कतै अन्तरिक्ष भनेको छ -शुक्लयजुर्वेद २५।२३) आमा द्यावाभूमि जत्तिकै महान् छिन्, विशालउपनिषद् दर्शनमा आमा देवतासरह हुन्छिन्, मान्नुपर्छ भनिएको छ । 'मातृदेवो भव ।' -तैत्तिरीयोपनिषद् एकादश अनुवाक) आमा संसारभरिकै तीर्थ समान वरेण्य हुन्छिन् भन्ने धर्मशास्त्रको मान्यता छ । -माता तीर्थं पुनः पुनः) पौराणिक ग्रन्थहरूका अनुसार तीर्थका अनेक भेद छन्- जङ्गमतीर्थ, मानसतीर्थ, स्थावरतीर्थ, सन्ततीर्थ, भक्ततीर्थ, गुरुतीर्थ पितृतीर्थ, मातृतीर्थ, पतितीर्थ, पत्नीतीर्थ आदि । आमा तिनै मध्येकी एक हुन् । सन्तान कुसन्तान हुन सक्छन्, माता कुमाता हुँदैनन् भनेका छन्, आद्यशङ्कराचार्यले देव्यापराध क्षमापनस्तोत्रमा । 'कुुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवति ।'
साङ्ख्या दर्शनले पुरुष र प्रकृतिको खेल मानेको छ, जगतलाई । यिनमा बाबुलाई पुरुषसित र आमालाई प्रकृतिसित तुलना गरिएको छ । गीतामा कृष्णले पनि यस्तै भनेका छन् । उनका अनुसार सन्तानोत्पादन प्रकृति -योनि) बाट हुन्छ भने बीज दिने काम ईश्वर -पुरुष) ले गर्छन् । 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् ।' -गीता १४।३) बरु पुरुषविना संसार चल्न सक्ला, प्रकृतिविना सक्दैन । प्रकृति विना उत्पादनै सम्भव हुन्न । बाबु नभए व्यवहार चलाउन सक्छन्, चलाएका छन्, आमाविना सकिंँदैन ।
सन्तानोत्पादनमा बाबुको पनि भूमिका हुन्छ । उपनिषद्ले उनको समेत सम्मान गरेको छ, तर आमाविना सम्भव हुन्न । रामायणकी नायिका सीताको जन्ममा बाबुको भूमिका खोजिएको छैन । तर उनलाई प्रकट हुन आमाकोख -पृथिवीको गर्भ) अनिवार्य मानिएको छ । महाभारतकी नायिका द्रौपदीको अवस्था पनि त्यस्तै हो । उनको जन्म यज्ञकुण्डबाट भएको छ । उनलाई याज्ञसेनी भन्नुको अर्थ पनि यही हो । यहाँ पनि बाबु देखाउन अनिवार्य मानिएको छैन । आमाकोख -यज्ञकुण्ड) अत्यावश्यक ठानिएको छ ।
परम सत्य पनि आमा नै हुन् । सत्यका पुजारी पनि आमा नै हुन् । सत्य खोज्ने पनि आमा, सत्य चिन्ने पनि आमा, सत्य लिने पनि आमा, सत्य दिने पनि आमा । बाबुको वीर्य आफैमा वीर्यमात्र होइन, ब्रह्मतेज हो, ब्रह्मविन्दु हो, सत्यकण हो, परमसत्यको ज्योतिर्मय परमाणु भनेकै वीर्य हो । आमाले त्यसैलाई धारण गर्छिन्, मूर्त बनाउँछिन् । नवजात शिशु सबै सत्य हुन् । सत्यकै अंश हुन्, उनीहरूलाई असल-खराब बनाउने घरपरिवारले गर्छ, समाजले गर्छ, सङ्गतले गर्छ, आमाले होइन । उनले सत्य नै लिएकी हुन्, सत्य नै दिएकी छन् ।
वेदमा सत्यको कुरो पनि आएको छ, ऋतको कुरो पनि आएको छ । 'सत्यञ्च मे, ऋतञ्च मे' -शुक्लयर्जुवेद अध्याय १८) सत्य भनेको निरपेक्ष सत्य हो, ऋत भनेको सापेक्ष सत्य । दुवै अलग-अलग हुन्, एउटै होइनन्, एकैसाथ रहन सक्दैनन् । तथापि आमामा भने यी दुवै हुन्छन्, दुवै हुन् । सारमा सापेक्ष सत्य रूपमा निरपेक्ष सत्य । गर्भ धारण गर्ने पनि आमा, गर्भमै चलाउने र बढाउने पनि आमा । जन्माउने पनि आमा, हुर्काउने पनि आमा । बाबु देखाउने पनि आमा, चिनाउने पनि आमा । खेलाउने पनि आमा, खुवाउने पनि आमा ।
सुताउने पनि आमा, उठाउने पनि आमा । हिँडाउने पनि आमा । हिँड्न सिकाउने पनि आमा । बोल्न लगाउने पनि आमा, बोल्न सिकाउने पनि आमा । हँसाउने पनि आमा, रुवाउने पनि आमा, रोएको नानी देखेर आफै रुने पनि आमा । आफैलाई चिनाउने पनि आमा, नानीलाई चिनाउने पनि आमा ।
फकाउने पनि आमा, फुल्याउने पनि आमा । तल पनि आमा, माथि पनि आमा । भित्र पनि आमा, बाहिर पनि आमा । रातमा आमा, दिनमा आमा । धारणमा आमा, धड्कनमा आमा । न्यायमा आमा, दयामा आमा । मायामा आमा, कायामा आमा । कर्ममा आमा, धर्ममा आमा । रसमा आमा, रासमा आमा । आसमा आमा, त्रासमा आमा । नादमा आमा, विन्दुमा आमा । कस्तो चमत्कार ? सर्वत्र आमा, आमा नै आमा ।
नवजात शिशुले पहिले देख्ने पनि आमा, पहिले चिन्ने पनि आमा । पहिले संसार देखाउने पनि आमा, पहिले स्तनपान गराउने पनि आमा । परमानन्दको अनुभूति गराउने पनि आमा, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने पनि आमा । पहिलो पाठशाला पनि आमा, पाकशाला पनि आमा । प्रयोगशाला पनि आमा, प्रकृति पनि आमा । परिचय पनि आमा, पहिचान पनि आमा । नानीहरू हाँसेको देखेर खुसी हुने पनि आमा, लड्ला भनेर डराउने पनि आमा ।
सगरमाथाको उचाइ हुन् आमा, समुद्रको गहिराइ हुन् आमा । संसार उठेको छ आमाबाटै, बनेको छ आमाबाटै, बढेको छ आमाबाटै । बनाउने पनि आमा, चलाउने पनि आमा । बढाउने पनि आमा, पहिलो उच्चारण पनि आमा, अन्तिम उच्चारण पनि आमा । दुर्गा पनि आमा, सीता पनि आमा । राधा पनि आमा, महाकाली पनि आमा । महालक्ष्मी पनि आमा, महासरस्वती पनि आमा । चाल पनि आमा, काल पनि आमा । कालको पनि काल महाकाल पनि आमा ।
नवजात शिशुको पहिलो उच्चारण हो- रुवाइ, जहाँ 'अ' को उच्चारण हुन्छ । संसारको पहिलो अक्षरभनेकै 'अ' हो । शब्दको स्रोत ओम हो । अ, उ र म तीन अक्षर मिलेर यो बनेको छ । 'अ' यसको पनिपहिलो अक्षर हो । अन्तिम उच्चारण पनि 'अ'मै पुगेर टुङ्गिन्छ, ऐय्या, आच्छु, आत्थु, मरे'नि आमा, लडेँ'नि आमा । सत्यभूमि पनि आमाको काख, ज्ञानभूमि पनि आमाको काख । शान्तिभूमि पनि आमाको काख, आनन्दभूमि पनि आमाको काख, पुण्यभूमि पनि आमाको काख । नाद हुन्छ आमाकै काखमा, विन्दु हुन्छ आमाकै काखमा । ओ हो ! के-के हो के-के, सबै आमा, सर्वत्र आमा, आमा नै आमा ।
प्रसव वेदना एक किसिमको मृत्यु नै हो, हर आमाका लागि । तैपनि उनीहरू त्यसको वास्ता गर्दैनन्, एकपटक आमा बन्नैपर्छ भन्छन्, बच्चा जन्माउन चाहन्छन्, हुर्काउन चाहन्छन्, खेलाउन चाहन्छन् । आमा नबनेको जीवन पूर्ण होइन भन्छन्, उनीहरू । स्वार्थ हुन्छ संसारमा, स्वार्थी हुन्छन् मानिस, तर आमा कहिल्यै स्वार्थी हुन सक्दैनन्।
बरु आफू भोको बस्न रुचाउँछन्, तर बच्चा भोको रहेको हेर्न सक्दैनन्। उनीहरू बच्चालाई नखुवाई खाँदा पनि खाँदैनन्, नसुताई सुत्दा पनि सुत्दैनन्। आफू भोको रहिन्छ कि भन्नेभन्दा पनि बच्चा भोको हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढी हुन्छ, आमाहरूलाई। कत्रो त्याग, कत्रो समर्पण। तब न आमा, त्यसैले त आमा। उनैको सम्झना गर्ने दिन भएकाले विशेष हुनपुगेको हो, आजको दिन। यसको अर्थ वर्षको एकपटक मात्र सम्झना गरे हुन्छ भन्ने होइन। वर्षैभरि यसैगरी सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, यस दिनले।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०८:२०